Afar Qalad oo Blogging ah oo ay ahayd inaan ka fogaado | Martech Zone
Galabtaan waxaan saacado kooban ku qaatay Barnes iyo Noble. Barnes iyo Noble aad ayey ugu dhowyihiin gurigeyga, laakiin waa inaan qiraa in Xuduudaha ay aad ugafiicanyihiin abaabulka iyo buugaagta oo si fudud looheli karo. Waxaan si joogto ah 'ugu lugeeyaa jidadka' Barnes iyo Noble anigoo eegay halkii aan waqti ku qaadan lahaa akhriska.
Sikastaba, waxaan sooqaatay majaladda aan jeclahay, Naqshadaynta Websaydhka (aka .net) iyo ugu dambeyntiina la soo qaaday Darren iyo Chris'buug, Sirta ku duugida Jidkaaga illaa Lix Sawir Dakhli.
Uma maleynayo in cinwaanka buuggu uu cadaalad ka dhigayo. In kasta oo buugaag badani ku saabsan yihiin lacag-abuurka iyo ku-guuleysiga Darren ee arrintaas, haddana talo-bixinta buuggu way sii dheer tahay. Waxaan kula talin lahaa qofkasta oo ka socda hagaha istiraatiijiyadeed ee loogu talagalay blogging sidoo kale. Way ka duwan tahay buugaagta kale ee aan ugu jeclahay baloog garaynta, sida Shel iyo Jirka buugga, Wadahadal qaawan, taasi waxay ku tahay xeelad badan qaabkeeda halkii ay ka ahaan lahayd mid istiraatiijiyadeed. Kani waa buug laguugu bilaabi karo inaad si guul leh u qorto.
Buuggu wuxuu xoojiyay farsamooyin iyo xeelado badan oo aan kaga hadlay balooggan, laakiin waa inaan idinla wadaago cilladaha ugu waaweyn ee ku jira balooggeyga:
Booggeygu marwalba isma waafaqsana jadwalkeyga shaqo darteed. Tani waxay dhaawaceysaa xawaareheyga maxaa yeelay akhristayaasha marwalba lama hubo inay ka kooban yihiin tayada maalin kasta.
Boggeygu waa ka calaamadeysan yahay aniga in ka badan Teknoolajiyadda Suuqgeynta iyo in badan oo ka mid ah qoraalladu aniga ayaa la wadaagaya sheeko-shaqsiyeedyo shaqsiyadeed oo laga yaabo inaanay waxba ku lahayn Teknolojiyadda Suuqgeynta. Akhristayaasheydu waxay u yimaadeen sidii ay taas iga filan lahaayeen, laakiin waxaan ogahay in akhristayaal badan ay ku soo socdeen taas darteed.
Bloggeyga waxaa laga yaabaa in lagu kala jaro mowduucyo badan oo niyadsami ah kuwaas oo bartilmaameed u ah… laga yaabee Suuqgeynta Internetka, Warbaahinta Bulshada, iyo Horumarinta Webka Weli waan shaqeyn karaa hal maalin si aan u jaro waxa ku jira, laakiin taasi waa shaqo adag (aad u adag). Haddii aan bilaabi lahaa, taasi waa hubaal jihada aan qaadi lahaa.
Magacayga domain ma noqon doono dknewmedia.com. Mar labaad, tani waxay mugdi gelinaysaa baloogga aniga iyo mawduucayga dhabta ah. Waxay sidoo kale ka dhigeysaa baloogga mid aan macquul aheyn in la iibiyo, maadaama aanan rabin inaan magacayga iibiyo. Waxaan isha ku hayaa meelaha qaar, in kastoo! Haddii aan helo qaar wanaagsan, waxaan eegi doonaa inaan kala furfuro nuxurkeyga oo magacayga ku kala saaro boggeyga.
Waxaan rajeyneynaa jawaabta Chris iyo Darren ee qoraalkan. Haddii aadan wali baloog dhigin, hubi inaad soo qaado buugga Darren iyo Chris si aad ugubilaabto wadada saxda ah. Akhris wanaagsan!
Tags: Analyticshal abuur lehMuuqaalka koowaadisku dhafanisku dhafan xayeysiintaXalka Suuqa Schaefer
Domainka waxaa loo badalay Marketingtechblog.com
Jul 6, 2008 markay tahay 5:41 PM
Waad ku mahadsantahay soo jeedinta. Xaqiiqdii waan eegi doonaa.
Waqtigaas dhexdhexaadka ah, xalkaygii # 3 wuxuu ahaa inaan abuuro baloogyo gooni ah mowduucyo kaladuwan. In kasta oo ay ii saamaxayso inaan diirada saaro qoraalkayga dhagaystayaal kasta, hadana mararka qaar way daalaysaa isku dayga abuurista nuxurka intaa leeg ee cusub.
Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo fikradaha dadka kale. gooniyado gooni ah, ama halis u gelinaya qaar ka mid ah akhristayaashaada?
Jul 7, 2008 markay ahayd 9:33 AM
U kala soocida waxyaabaha loo qoondeeyey baloogyada la bartilmaameedsaday waxay leedahay faa'iidooyin badan, labadaba rajada akhristayaashaada iyo sidoo kale uruurinta ereyada muhiimka ah ee makiinadaha raadinta. Ma jirto sabab uu qof u iska diiwaan gelin kari waayo bogaggaaga midkood, waxaan u maleynayaa inay taasi tahay sida ugu wanaagsan ee loo maro!
Jul 6, 2008 markay tahay 10:47 PM
Waxaan u maleynayaa in kala soocida waxyaabaha ku jira hal blog ay noqon doonto wadada loo maro halkii laga heli lahaa seddex ama afar bog oo kala duwan. Waxaan filayaa haddii aad haysato waqti aad ku cusboonaysiiso baloogyada inay fududaan lahayd.
Jul 8, 2008 markay ahayd 6:21 AM
Waad ku mahadsan tahay buugga la xusay 🙂 Iyadoo aan loo eegin sida loo calaamadeeyo baloog, codka gadaashiisa inta badan waa qayb muhiim ah ee fadlan ha lumin dhadhanka "Douglas"
Jul 10, 2008 markay tahay 8:40 PM
Mahadsanid Chris! Maya - Doug kama maqnaan doono balooggan waqti dhow waxaan balan qaadayaa… ilaa lacag u dhexeyso aniga iyo aniga… mooyee
Qoraal xiiso leh oo arrintan ku saabsan, maalmo gudahood markii aan beddelay magacayga domain, waxaan ka soo galay # 2 ee Google illaa # 1 ee Suuqgeynta Teknolojiyada Suuq geynta sidaa darteed waxbaa ku jira waxyaabahan SEO.
Waxay u sameysaa daraasad kiis wanaagsan oo ku saabsan xulashada magacaaga domain!
Aug 5, 2008 at 9: 33 AM
Gee whiz. Iska iloow buugiisa miyaad aragtay raggan blog. Mahadsanid madax kor.